ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၁-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၁-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ကွန်ရက်က ဒေါ်မြင့်မြင့်အေး ဖမ်းဆီးခံရ click
- ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဝင် အင်းလေးဒေသခံများ ရှောင်ပုန်းနေရ click
- ဆင်းရဲသားတွေ ဘ၀မြှင့်ဖို့ သမ္မတ ပြောကြားပြီးတဲ့နောက် ရခိုင်က လယ်သမားတွေ လယ်ထွန်ခွင့်မရ click
- သ်ိမ်းထားလယ်ထဲက ဧက ၈၀ ပြန်ပေးတဲ့အတွက် ဗလိပေါက်ရွာသားများ ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ မဆင်နွှဲတော့ click
- နိုင်/ကျဉ်း စာရင်း မငြိမ်သေး၊ လက်ပံတောင်းကိစ္စ ထောင်ချခံရသူများ နိုင်/ကျဉ်းဖြစ် click
- ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွင် မြေအသိမ်းခံရသူများ ဆန္ဒပြ click
- တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အမတ် သိမ်းထားလယ်မြေများ ပြန်ပေးမည်ဆိုသော်လည်း မထူးခြားသေး click
- အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဦးဆောင်ပြီး လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြမည် click
- ဖားကန့်တွင် တနိုင်တပိုင် ကျောက်တူးသူ ၂၀၀ ကျော် အဖမ်းခံရ click
- ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကို ထောက်ပံ့ရန် တနှစ်လုံးအတွက် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ကျော် လိုအပ် click
- ကချင် တကျော့ပြန်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် လမ်းလျှောက်ဆုတောင်းပွဲ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ ကျင်းပ click
- ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပွဲ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြုလုပ် click
- မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် KIA ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ် click
- KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့ကြား အောက်ခြေ ထိတွေ့ တိုက်ပွဲများ ရှိနေဆဲ click
- စခန်းအသိမ်းခံရသည့်အပြင် အပေါ်စီးပါ စွပ်စွဲခံရသော SSPP click
- တောင်ပိုင်း ၀ တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရ စစ်ရေးတင်းမာဆဲ၊ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်လာမည်ကို ဒေသခံလူထု စိုးရိမ် click
- နမ္မတူမြို့ဘက် လှုပ်ရှားသည့် အစိုးရစစ်ကြောင်းတခု ရွာသားတဦးအား ပစ်သတ် click
- ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပိုင်ရှင်သည် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ် ပါဝင်သည်ဟု သမ္မတ ပြော click
- သမ္မတနှင့် RCSS/SSA တို့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များ နေရာချထားရန် ဆွေးနွေး click
- RCSS ရဲ့ နေပြည်တော် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှ အမေးအဖြေများ click
- အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း ဆွေးနွေးပွဲ မော်လမြိုင်တွင် ကျင်းပ click
- အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင် ညှိနှိုင်းရန် UNFC အဆင်သင့်ဖြစ် click
- FUP ထူထောင်ရန် ကျားဖြူပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီအားလုံး သဘောတူ click
- ၉၀ အနိုင်ရ မရာ လွှတ်တော်အမတ် Pu Ro Uk ကွယ်လွန် click
- ဘာသာရေးပဋိပက္ခများ ရပ်တန့်ရန် နှစ်ဘက် စကားပြောဖို့ လို click
- ၉၆၉ အသုံးပြုမှု ရွှေညောင်အာဏာပိုင်တို့ မနှစ်သက် click
- မလေးရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် မိသားစုဝင်များ စိုးရိမ်ပူပန် click
- နိုင်ငံသားများ လုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရက မလေးရှားသို့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လွှတ်မည် click
- မလေးရောက် မြန်မာများကို ကူညီရန် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထွက်ခွာ click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများအား အစိုးရအဆင့်မှ အကူအညီပေးနေပြီ click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ပြည်တော်ပြန်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ကူညီမည် click
- မလေးရှားရောက် မြန်မာများ ပြန်လာရန် MAI လေယာဉ်လက်မှတ်ခ ထက်ဝက်လျှော့ပေးမည် click
- Buddhism & Non-Violence အဖြေရှာ သုံးသပ်ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ) click
- ကလေး ၂ ဦးထက်မပိုရ ကန့်သတ်ချက် ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီ ထောက်ခံ click
- မှတ်ပုံတင် အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးရာမှာ ပုံမှန်ထက် ပြုလုပ်သူပိုများ click
- ILO ၏ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းပေးရေး အလားအလာကောင်းနေ click
- စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးရန် သင့်မသင့် EU က စောင့်ကြည့်ရန်လိုဟု ဆို click
- ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံခရီး​စဉ်နှင့်​ ပတ်သက်ပြီး​ ​မေး​မြန်း​ချက် (အသံ) click
- ကရင်နီပြည်နယ်တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ–တကသ ဖွဲ့စည်း click
“ပုဝါမကူ ရေမရှူကြေး” (ကာတွန်း လဂွန်းအိမ် - ဧရာဝတီဝက်ဘ်ဆိုက်)
- ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုပေးပွဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပ click
- ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုကို NLD ပညာရေးကွန်ရက် ရရှိ click
- လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ နိုင်ငံတကာတော် ရုပ်ရှင်ပွဲတော် ဇွန် ၁၅ တွင် စမည် click
- လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ သမ္မတကို ဖိတ်ကြားမည် click
- အသရေဖျက်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသည့် The First weekly အမှု စီရင်ချက်ချ click
- အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှု မီဒီယာဥပဒေကြမ်း ကန့်ကွက်မှုကြုံ click
- စာနယ်ဇင်းကောင်စီ၏ အများပြည်သူ ၀န်ဆောင်မှု မီဒီယာဥပဒေကြမ်းအပေါ် ဝေဖန်ချက် လွှတ်တော်ကော်မတီများ လက်ခံ click
- အကန့်အသတ် ရှိနေသေးသည့် မြန်မာ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် (အင်တာဗျူး) click
- ဦးခင်ညွန့်ရဲ့ လက်ရာ ငရဲနဲ့ တာဝတိံသာ (ဆောင်းပါး) click
- တြိ ပါဝါအားဖြင့် လျှောက်လှမ်းရဖွယ့် ခရီး (ဆောင်းပါး) click
- သူတို့ခေါ်တော့ ဒုက္ခသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ တော်လှန်ရေးသမား (၂၁) click
- သူတို့ခေါ်တော့ ဒုက္ခသည်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ တော်လှန်ရေးသမား (နိဂုံးပိုင်း) click
- မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် စိန်ခေါ်မှုများ (အယ်ဒီတာ့အာဘော်) click
- ပညာရေးစနစ် ပြောင်းလဲနိုင်ရန် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ရေးဆွဲပြီး လွှတ်တော်တင်မည် click
- တနိုင်ငံလုံး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ချက် မွန် အများဆုံး click
- ကယားပြည်နယ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ချက် ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကျဆင်း click
- တိုင်းပြည်စီးပွား အမှန်တကယ် တိုးတက်စေရေး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ ဖွံ့ဖြိုးရန် လို click
- ကူမင်းမြို့ ကုန်စည်ပြပွဲအပေါ် မြန်မာကုန်သည်များ အားရမှုရှိ click
- ကိုရီးယား-မြန်မာ စီးပွားရေးဖိုရမ် ဇွန်လ ၁၈ ရက်တွင် ကျင်းပမည် click
- CMP ကုန်ကြမ်းတင်သွင်းမှု ကြိုတင်ခွန်အတွက် အကျုံးမဝင် click
- မိုက်ခရိုဆော့ဖ်က မြန်မာဈေးကွက်အတွက် သင့်တင့်နှုန်းထား ဆောင်ရွက်ပေးမည် click
- မိုဘိုင်းတာဝါတိုင်များ တပ်ဆင်ရန် အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံများ ငှားရမ်းနေ click
- မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဈေးကွက်အတွင်း Sing Tel ဝင်လာပြီ click
- မြန်မာနိုင်ငံတွင် SingTel ကုမ္ပဏီ မြန်နှုန်းမြင့် ဆက်သွယ်ရေးစနစ် ထူထောင်မည် click
- ဆက်သွယ်ရေးတင်ဒါ မရခဲ့ရင်တောင် ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု SingTel တပ်ဆင်ပေးသွားမယ် (ရုပ်သံ) click
- Axiata ဆက်သွယ်ရေး တင်ဒါရခဲ့ရင် 3G ကွန်ရက်နဲ့ ဈေးချိုဆင်းကတ်တွေ ရောင်းမည် (ရုပ်သံ) click
- လူကုန်ကူးသူများ အဝေးပြေးကားဂိတ်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းမိ click
- အာမခံထားရှိသည့် စက်တပ်ယာဉ်ဖြင့် ထိခိုက်မှုများအတွက် နစ်နာမှု လျော်ကြေး ခံစားခွင့်ရှိ click
- စက်သုံးဆီအရောများ ရောင်းချ၍ ဈေးမြင့် ကားများ အင်ဂျင် ထိခိုက် click
- မြန်မာဇာတ်ကားများ အကျပ်အတည်း ကြီးမားစွာ ရင်ဆိုင်နေရ၊ စိတ်ဝင်စားသူ ထိုးကျလာ (ရုပ်သံ) click
- Multimedia မှ ဗီဒီယိုအကယ်ဒမီဆုကို ပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးဆုအနေဖြင့် ရွေးချယ်ပေးအပ်ရန် စီစဉ် click
- ဇာတ်ညွှန်းသင်တန်း ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတွင် ပို့ချမည် click
- ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကို ပျော်ရွှင်စွာ တာဝန်ယူမယ့် မော်ရင်ဟို click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 9:06 PM
ဦးရွှေမန်း သမ္မတလုပ်မယ်ဆိုတာကို ........
.. ဒါပေမယ်. လုပ်ရည်ကိုင်ရည်လေးသိအောင် ဦးပိုင်
တို. ၊ စစ်တပ်တို. က ဥပဒေမဲ. လက်ဝါးကြိးအုပ်တာ ၊
ကျူးလွန် တာတချို. လောက် နဲ. မတရား လယ်သိမ်း ၊ ယာသိမ်း တွေကို နမူနာ ... နှိမ်နင်း အရေးယူ
ဒါဆို ၂၀၁၅ အတွက် သေချာပါတယ် ။
... သတ္တိ ရှိရှိ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ရဲကိုင်ရဲ တဲ.သူ ၊
လုပ်နိုင်တဲ.သူ ...... မြင်ဘူးချင်လို.ပါ ။